Poisonless အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရည်သန့်ရှင်းရေး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Precision များအတွက် Poisonless သန့်ရှင်းရေးအရည်,အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အရည်ပျော်စေ,အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် Poisonless အရည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် > Poisonless အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရည်သန့်ရှင်းရေး
HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်မြင့်မားတဲ့ dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်, အလွန်အမင်းနိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, ကျန်ကြွင်းများနှင့်ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲလွယ်ကူသောမတည်ငြိမ်မှု၏အာဂွန်ဆပ်ပြာဖြစ်ပါတယ်။ HFE hydrofluoroether ကောင်းစွာဖြန့်ခြင်းနှင့်ခြေရင်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအပေါက်မှလူစုခွဲနှင့်အပေါ်ယံအခွံပေါ်တွင်စံပြအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်နိုငျသညျ, စိုစွတ်စေသော, solvation နှင့် cleaning.Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီကျယ်ပြန့်သည်တိကျမှန်ကန်အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းများ၏သန့်ရှင်းရေးအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည် ထိုကဲ့သို့သောအီလက်ထရောနစ်တိကျသန့်ရှင်းရေး, PCB သည်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို, ထိုတိကျသောအားလပ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးမျက်နှာပြင် / မှန်ဘီလူး, ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ, LCD ကိုနှင့် hard disk ကိုစသည်တို့ကို၏သန့်ရှင်းရေးနှင့် dewatering နှင့်ခြောက်သွေ့ဘို့လည်းသုံးနိုင်တယ်, အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းယိုစိမ့်ထောက်လှမ်းသို့မဟုတ်အဖြစ် လေထုတင်းကျပ်စွာစမ်းသပ်မှုများနှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်း။
အဆိုပါ Hfe Codorless သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:
အီလက်ထရောနစ် Precision သည် 2. သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် လျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းကောင်းသောနှင့်လြှပျစစျမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်းလင်းနိုင်သည်, နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အာကာသတိုးတက်စေနိုင်တယ်,
3 ။ Eco Friendly သန့်ရှင်းရေး Solutions အလွန်သင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် (54 ℃) ဖြစ်ပြီး, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, စစျနိုငျ အတွက်အခန်းကဏ္ဍ ဟာရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအအေးအစိတ်အပိုင်းများ။ Non-အန္တရာယ် ကုန်ပစ္စည်းများ , Non-မီးလောင်ရာနှင့် Non-burst, မီးကိုမဒါမှမဟုတ် flash အချက်;
5. Hydrofluoroether အစွမ်းမဲ့သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျမဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းမဟုတ်သော - ကိုစိတျဆိုး;
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Precision များအတွက် Poisonless သန့်ရှင်းရေးအရည် အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အရည်ပျော်စေ အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် Poisonless အရည်